Owemuvhango usilandise ngendawo ayidlalayo nezinselela zayo | News24
Owemuvhango usilandise ngendawo ayidlalayo nezinselela zayo
Johannesburg - UThandaza woMuvhango etshengisa ku-SABC2 ngumlingisi oyintandokazi kwabaningi kanti futhi kungenzeka ukuthi lo mdlalo ubukwa kakhulu nje kungenxa yakhe.
USindi Dlathu odlala indawo kaThandaza uthi nakuba kunomvuzo akwenzayo futhi eyithanda nendawo ayidlalayo, uthi kunezinselela zakhona.
OLUNYE UDABA: Sithole ukwelashwa isihlabani seMuvhango
"Ngidlala indawo yomuntu odabukileyo kanti umqondo awazi ukuthi engikwenzayo ukulingisa ngoba kufanele 'ngiwugxilise kulento engiyenzayo. Okubuhlungu ukuthi kwesinye isikhathi asiphumi kuleyo ndawo ebesiyidlala," usho njlao etshekla iphephabhuku iBona.
USindi uphinde waqhuba ngokuthi okumsizayo ukuqeqeshwa; "Ngoba siqeqeshelwe ukuyenza lento. Siyazitshela ukuthi kufanele sigxile kulokhu esikwenzayo ngaleso sikhathi yize umzimba usuke ungavumi. Iningi lethu ligcina liyimvithi ukukhathala litshengisa nezimpawu zokukhwantalala," kusho uSindi.
USindi udlala indawo kaThandaza kuMuvhango ku-SABC2 nsuku zonke ngo-21:00.
Thola udaba oluphelele kuDrum...